“Sifuna umgwaqo wetiyela” | News24
“Sifuna umgwaqo wetiyela”
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaAmanye amalunga omphakathi akade eyingxenye yesiteleka ngoMsombuluko.
“Asilwi namuntu sifuna izidingo zethu kuphela.”
Lawa ngamazwi amalunga omphakathi wasendaweni yaseMaqongqo akhala ngokungabi nazo izidingo ezifana nomgwaqo wetiyela kanye namanzi kompompi.
Lo mphakathi uvuke umbhejane ngoMsombuluko mhla ziyi-7 kuMfumfu (October) bavala umgwaqo ngezihlahla kanye namatshe bekhala ngokuthi izidingo zabo azinakiwe. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto kanye namatekisi kanti nezingane ebeziya esikoleni nazo zibe nenkinga. Phakathi kwezinkinga ezinkulu abakhala ngazo amanzi kanye nomgwaqo.
Umphakathi ukhala ngokuthi umgwaqo ongenela kule ndawo ongu-D1001 kanye no-D1026 kunezindawo lapho ufika khona ungasilona itiyela kodwa usuwubhuqu. Bathi kwezinye izindawo umgwaqo ufana nendlela nokwenza izithuthi zomphakathi amatekisi kanye namabhasi zigcine zingafuni ukubashiya eduze nasemakhaya ngoba zikhala ngokuthi umgwaqo mubi.
UNks Winnie Zulu nobengomunye akade behola lombhikisho uthe lowo obenguNgqongqoshe wezokuThutha kanye nokuPhepha koMphakathi nosebambe njengemeya yeTheku manje uMnu Mxolisi Kaunda wabathembisa ukuthi kuzoqala kufakwe umgwaqo wetiyela kulezi zindawo ezingenawo ngenyanga kaMandulo (September) kodwa seyize yaphela inyanga kungekho okwenzekalayo kanti futhi akekho nobachazelayo ukuthi kungabe yini ebambile.
UMnu Kaunda wayevakashele kulendawo ngesikhathi umphakathi ubhikisha uvale umgwaqo ukhala ngayo le nkinga ngenyanga ka-March. “Besilindele ukuthi siqale sibone kulungiswa umgwaqo ufakwa itiyela ngenyanga eyedlule kodwa lokho akwenzekanga. Siphila kabuhlungu njengoba singena umgwaqo. Itiyela emgwaqeni osetshenziwa izithuthi zomphakathi ligcina eMaqongqo ezitolo uma ngabe usuqhubeka eBhananeni ngaseMkhambathini alisekho umgwaqo mubi akuhambeki.
“Ngesikhathi sitelekile sathenjiswa ukuthi umgwaqo sizolungiselwa. Sifuna ukwazi ukuthi yini into ebambile ekutheni singabi nawo umgwaqo wetiyela okanye ungaqalwa ukulungiswa njengesithembiso,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi elingazidalulanga igama lithe lona esikhathini esingekudala esedlule beligulelwa umyeni wakhe kodwa i-ambulensi ibingakwazi ukungena izomthatha endlini ngenxa yokuthi umgwaqo mubi .
“Bekungiphoqa ukuthi njalo uma ngabe kumele alandwe i-ambulensi ngimubelethe emhlane ngoba izimoto bezingakwazi ukungena zize zizomlanda. Uze wadlula emhlabeni ngibhekene naleyo nkinga. “Bengiyibika inkinga kukhansela ngicela ukuba basilungisele umgwaqo kodwa lutho. Noma eseshonile ngibikile futhi,” kubeka yena. Lo mphakathi ufunge wagomela ukuthi uzoqhubeka uvale umgwaqo kuze kube bayabona ukuqala kokulungiswa kwemigwaqo ewubhuqu kulendawo.
Inkinga yamanzi yona bathi yaqala ngonyaka wezi-2006 kodwa kuze kube imanje ayikakaze ilungiswe. Bathe baphila ngamanzi abawathola emalolini athutha amanzi kanti nawo abuye angafiki bese kubaphoqa ukuba bayokha exhaphozini elisehlathi nabathi liyingozi.
“Ngisho ezikoleni kanye nasemtholampilo awekho bancike kumaloli athutha amanzi. Okusicasula kakhulu ukuthi kwezinye izindawo akhona amanzi njengasendaweni yaseSitingini lapho kuhlala ngakhon ikhansela kanye naseZinembezi kwezinye izingxenye akhona kodwa kwezinye azikho. Sikhathele manje sifuna izidingo zethu. Ngeke baze balindele ukuthi ogogo abadala balokhu beyokha amanzi emaxhaphozini,”kusho uNks Busi Msomi. Amalunga omphakathi wakule ndawo aphinde asola ikhansela ngokungazishayi ndiva izidingo zabo njengoba bethi aka lubhadi ngisho emhlanganweni uma ngabe bewubizile. “Asinaye nje thina umholi kule ndawo ngoba ngisho kuthi siyateleka angeke uze umbone ezixaka ezokhuluma nathi kuzanywe ukuthi kulungiswe inkinga esuke ikhona,” kusho elinye ilunga lomphakathi.
Ikhansela lakulendawo uMnu Nhlanhla Zondo uthe abantu akade beteleka akusiwo amalunga omphakathi kodwa amalunga eqembu le-Nkatha(IFP). Uthe umphakathi wakulendawo wona uyalwazi udaba lomgwaqo ngoba lakhulunywa. “Ngenyanga kaNcwaba (August) izikhulu zoMnyango wezokuThutha, ubuholi bomphakathi kanye nabashayeli bamatekisi kanye namabhasi okuyibona ababekhala kakhulu ngokuthi umgwaqo ulimaza izimoto zabo bahlangana. Kwakhulunywa kwathiwa ukuze kwakhiwe umgwaqo osezingeni kumele kulandelwe imigudu efanele. “Kwabe sekuthiwa loko kungathatha izinyangana nokuzokwenza ukuthi umgwaqo uze ukwazi ukulungiswa ngasekupheleni kwenyanga kaMasingana (January) ngonyaka ozayo. Ingako abashayeli bamatekisi kanye namabhasi bengazange babe ingxenye yesiteleka ngoba bayasazi isivumelwano,” kubeka yena.
Ephawula ngodaba lwamanzi uvumile ukuthi ikhona inkinga yamanzi kodwa wathi akusiyona yonke indawo lapho engekho khona amanzi.
“Akusikhona ukuthi amanzi awekho qobo kodwa ashintshanisa izinsuku aphuma ngazo. Inkontileka ebeyiwalungisa ibisamile ngenxa yomsebenzi omningi kodwa izobuya izoqhubeka ingakapheli lenyanga.”